Ụlọ ahịa Apple ọhụrụ nke Hunan ga -emepe na Septemba 4 | Esi m na mac
Ụlọ ahịa Apple ọhụrụ nke Hunan ga -emepe na Septemba 4
N'ọgwụgwụ Ọgọstụ, anyị na -agwa gị gbasara akwụkwọ mmeghe na -abịanụ nke ụlọ ahịa Apple China ọhụrụ, n'obodo Changsha (mpaghara Hunan), ụlọ ahịa ọhụrụ nke na -agaghị abụ nke ikpeazụ kemgbe ọnwa a, Apple na -ezube imepe ụlọ ahịa Apple ọzọ, oge a na Wuhan, na mpaghara Hubei.
Site na webụsaịtị Apple na China, ụlọ ọrụ Tim Cook ekwuputala ọkwa ụbọchị Apple Changsha ga -emepe ọnụ ụzọ ya. Ga -esote Satọde, Septemba 4 n'elekere 10 nke ụtụtụ.
Storelọ ahịa Apple ọhụrụ a dị na ebe a na-ere ahịa IFS a ma ama nke obodo ahụ, ụlọ ahịa nwere elu okpukpu abụọ ma ga-enye atụmatụ na ọrụ niile nke Apple Ọ na-enye mgbe niile na ụlọ ahịa ya niile gburugburu ụwa, gụnyere Taa na klaasị ihu na Apple, klaasị ga-amalite n'echi mmeghe.
Na webụsaịtị Apple nke ụlọ ahịa ọhụrụ a, anyị nwere ike gụọ:
Site n'ọnụ ụzọ ụlọ ahịa ahụ, ndị ahịa ga -ahụ Forum ozugbo na videowall dị iche, nke na -akwado Taa na nnọkọ Apple. Ndị ọkachamara ihe okike Apple na -eduzi, nnọkọ kwa ụbọchị n'efu na -enye mmụọ okike, na -akụzi nka bara uru, ma na -enyere ndị ahịa aka ịmụta ịga n'ihu na ngwaahịa Apple ha. Iji mee mmemme mmeghe ahụ, ndị ọkachamara na -emepụta ihe ga -anabata nnọkọ pụrụ iche taa na nnọkọ Apple "Art Walk: Chọpụta Agba nke Changsha" malite na Septemba 5, na -enye ndị ahịa ohere inyocha obodo ahụ wee jide agba ya dị egwu na iPad Pro.
Apple ga -achọ ka ndị ahịa niile kpuchie nkpuchi ihu Iji banye n'ime, nkpuchi nke ndị ọrụ ụlọ ahịa ga -ejikwa. Na mgbakwunye, ndị ahịa niile ga -atụle oke okpomọkụ ha tupu ha abanye n'ụlọ ahịa ma jiri obiọma rịọ ka ha nọgide na -enwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ụlọ ahịa Apple ọhụrụ nke Hunan ga -emepe na Septemba 4
Eriri Apple Watch dị ugbu a agaghị ekwekọ na Apple Watch Series 7
Telegram maka Mac emelitere na mbipute 8.0